Banyere anyị - EGay Shop
Emere Egay naanị site n'icheta na onye ọ bụla pụrụ iche, pụrụ iche, otu ụdị. Anyị maara na anyị chọrọ inyere ndị mmadụ aka ịchọta ma gosipụta na ha dị icheiche ma gosipụta ụwa dịka ha pụrụ iche.
Ụlọ ọrụ anyị dabeere na France. Anyị na-arụ ọrụ na ndị na-azụ ahịa n'ụwa nile na ụlọ nkwakọba ihe nke ngwaahịa anyị na-abụkarị na Eshia. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịhọrọ ngwaahịa kachasị mma nke na-akwado njirimara anyị na njirimara anyị ka anyị na-akwụ ụgwọ. A haziri ihe ndị ahọrọ iji nye gị ohere igosipụta àgwà gị mgbe ị na-enwe ogologo ndụ ogologo.
Anyị chọrọ ime ka ị nwee obi ụtọ mgbe ị na-ekpori ndụ, ị hụrụ n'anya, ị na-eme njem ma ọ bụ mgbe ị na-arụ ọrụ. Anyị nọkwa ebe a iji nyere gị aka igosipụta àgwà nganga gị kwa! Ọ bụ ya mere mkpokọta anyị na-enye akwa akwa akwa na ngwa ngwa pụrụ iche. Ihe ndị anyị na-arụ bụ ndị bara uru ma mụọ iji nye gị ohere kachasị mma site na iji ha. Anyị dị ka gị! Anyị ga-enwekwa mmasị na ị ga-ekerịta nrọ gị na ọhụụ gị.
N'ezie, ụlọ ọrụ anyị ga-abụ n'efu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndị ahịa anyị dị ịtụnanya. Nke a bụ ihe mere anyị na-eji enye nkwado ndị ahịa kachasị mma ma bụrụ ndị enyi, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu na iwu gị. N'ezie, anyị nwere ike ọ gaghị abụ azụmahịa ezinụlọ ma anyị na-eche n'ezie na anyị na-emeso ndị ahịa anyị niile dịka ezinụlọ, naanị n'ihi na ha kwesịrị ya!
Nchịkọta anyị dị ebe a iji gosipụta otú ị dị egwu ma dị mma.
Ya mere, legharịa anya na ụlọ ahịa anyị ma bulie ngwaahịa ma ọ bụ abụọ ị chọrọ ...
Oge eruola ịgwọ onwe gị! Daalụ maka ịhọrọ anyị!